Madaxweynaha oo ku booriyay Jaamacadaha Soomaaliya inay yeeshaan kulliyado lagu tababbaro macallimiinta “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha oo ku booriyay Jaamacadaha Soomaaliya inay yeeshaan kulliyado lagu tababbaro macallimiinta “SAWIRRO”
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo magaalada Boosaaso kula hadley ardayda, macallimiinta iyo madaxda Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa ku booriyay inay yeeshaan kuliyado lagu tababbaro macalimiinta.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Jaamacadda Bariga Afrika ay ka mid tahay jaamacadaha ay ku faanto Soomaaliya, isla markaana dabooshay qeyb ka mid ah baahida waxbarasho ee ka jirta degaannada Puntland.
“Maanta waxay ii tahay maalin farxadeed oo i xusuusineysa shaqadeydii hore ee macallinnimada iyo adeegyada waxbarashada ee dalka. Jaamacadda Bariga Afrika iyo ardeydeeduba waxaan ugu hambalyeynayaa horumarka muuqda ee ay gaareen, waana filayaa inaad gaari doontaan meel intaan ka sareysa’’.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay dadaal weyn ugu jirto sidii ay u xoojin lahayd Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed ee dhowaan dib loo hawlgeliyay, si loo soo celiyo fursadihii waxbarashada bilaashka ee dalka ka jirtay oo ay ka faa’iideysan karaan ardayda aan qoysaskooda awoodin jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee lacagta lagu dhigto.
“Aqoonta waxay ka mid tahay adeegyada muhiimka ah ee dalkeena u baahan yahay. Waa wax lagu faano in jaamacado badan oo gaar ah oo dalka laga sameeyay ay si weyn u najaxeen. Waa jiraan kuwo aan u qalmin in jaamacado loogu yeero, laakiin waxaa ka xun in jahliga uu nagu sii baaho, kuwaas aan tayadooda fiicnayna, waxaan isku dayi doonaa inaan si wadajir ah u toosino’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in si kor loogu qaado tayada aqoonta dalka loo baahan yahay in dalku yeesho kulliyado macallimiin oo ardayda ay ka faa’iideysan karaan.
“Waxaan dhammaan jaamacadaha dalka farayaa inay yeeshaan kulliyado lagu tababaro macallimiinta si kor loogu qaado tayada waxbarashada. Macallinimadu wa xirfad la barto, sidaa darted waxaan u baahanahay inaan helno barreyaal xirfadahooda ay sareyso oo kobcinta waxbarashada dalka kaalin firfircoon ka qaata’’.
Waxaa kale oo uu Madaxweynaha sheegay in baahida labaad ee muhiimka u ah dalka ay tahay barashada siyaasadda wanaagsan ee wax dhista.
“Dalkeena waxaa uu caalamka ku lahaa sharaf iyo karaamo Afrika oo dhan laga wada og yahay. Doorkeenii iyo sharaftii aan lahayn waxaa la degay siyaasad xumo ina soo wajahday. Waxaanu lahayn dowlad xoog badan oo milateri casri ah ay u dhisnayd, intaas oo dhanna waxaa baabi’iyey siyaasadda oo inaga halowday’’.
Waxaa uu Madaxweynaha ku booriyay dhalinyarada inay siyaasadda bartaan.
“Waxaa dhalinyarada ku boorinayaa inay bartaan siyaasadda wanaagsan si waddankeena uu u noqdo mid horumarsan. Siyaasadda wanaagsan waa tan qofka ku dhalisa inuu shacabkiisa u adeego, xirfad kasta ha yeeshee, marka taasi la kala garto, lana dhameystiro kaabeyaasha muhiimka u ah siyaasadda, ayaan heli karnaa fursad aan ku soo xulno dad u bisil hoggaanka dalkan kheyraadka badan leh’’.
Madaxweynaha waxaa uu ardeyda Jaamacadda Bariga Afrika iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah mustaqbalka waddanka, uga digay inay ka fogaadaan naceybka, xagjirnimada diimeed iyo tan qabyaaladda, maadaama intuba ay yihiin kuwo cawaaqib xun dhalinaya.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda oo kormeeraya halka lagu qabanayo shirka Maamul u sameynta Hiiran iyo Sh/Dhexe
Wasiir Diini “Argagixisadu waa khatar u baahan Iskaashi Caalami in looga hortago”.